Tag: cmo sahan | Martech Zone
Tag: cmo sahan
Axad, Juun 5, 2016 Douglas Karr
Lahaanshaha hay'ad waxay noqotay mid abaal marin iyo caqabadba leh. Asalka dhammaan waxa aan u gaarno macaamiisheenna, weli waxaan jecel nahay ka caawinta ka guuritaanka macaamiisha iyada oo loo marayo qaabka bislaanshaha suuqgeynta. Waxay awood noo siineysaa inaan lashaqeyno bilowga iyo macaamiisha shirkadaha si isku mid ah, istiraatiijiyad ahaan u kordhineysa wacyigooda iyo dakhliga intarneedka. Waxa aanan fahmin waxay ahayd intee in le'eg oo isbeddel ah annaga, hay'ad ahaan, ayaan u baahan doonnaa inaan sameyno si aan uga sii hor marno qallooca oo aan ugu sii jirno tartankeena
Sahanka CMO - Ogosto 2013
Talaado, Agoosto 27, 2013 Douglas Karr
Saraakiisha suuq geynta (CMOs) ayaa si isa soo taraysa ugu qoondaynaya ilaha warbaahinta bulshada, laakiin tiro aad u naxdin badan ayaan arkeynin soo laabasho la taaban karo oo ku saabsan maalgashigan, sida lagu sheegay Daraasadda CMO Kaliya 15 boqolkiiba 410 CMOs oo ay daraasad ku sameysay borofisar Christine Moorman oo ka tirsan jaamacada Duke ee Fuqua School of Business ayaa sheegtay inay cadeeyeen inay saameyn cadeyna ku leeyihiin kharashaadka suuq geynta warbaahinta bulshada. Boqolkiiba 36 kale waxay ka jawaabeen inay leeyihiin dareen wanaagsan oo ah saameynta tayada, laakiin maahan
Khamiista, Febraayo 28, 2013 Khamiista, Febraayo 28, 2013 Douglas Karr
Waxaa la aasaasay Ogosto 2008, Sahanka CMO waxaa la maamulaa laba jeer sanadkii, iyadoo loo marayo sahan internetka ah, si loo ururiyo loona faafiyo fikradaha suuqleyda sare si loo saadaaliyo mustaqbalka suuqyada, loola socdo heerka sare ee suuqgeynta, loona hagaajiyo qiimaha suuqgeynta shirkadaha iyo bulshada. Isku soo wada duuboo, waxay umuuqataa miisaaniyadaha suuq geynta inay filayaan inay isdhaafsadaan, miisaaniyadaha suuqgeynta B2B ayaa lafilayaa inay hoos udhacaan, suuqyada caalamiga ah uma muuqdaan kuwo wanaagsan, suuqgeynta dhaqameed ayaa hoos udhacaysa, iyo miisaaniyadaha suuqgeynta.
Talaado, Febraayo 15, 2011 Axad, Oktoobar 19, 2014 Douglas Karr
Sahanka CMO wuxuu uruuriyaa oo faafiyaa fikradaha suuqleyda sare si loo saadaaliyo mustaqbalka suuqyada, loola socdo heerka sare ee suuqgeynta, loona hagaajiyo qiimaha suuqgeynta shirkadaha iyo bulshada. Isbadal muhiim ah, oo Xajka Suuqgeynta uu tilmaamay, waa rajada laga qabo kharashaadka warbaahinta bulshada growth koritaanka joogtada ah ayaa si xoogan loogu taageeray sahanka dhexdiisa. Waxaa la aasaasay Ogosto 2008, Sahanka CMO waxaa lagu maamulaa labo jeer sanadkii iyadoo loo marayo sahaminta internetka. Su'aalaha ayaa ku soo noqnoqda waqti ka dib